Kungani wenze i-ecobricks? | Ecobricks.org
Kungani Wenza i-Ecobricks
I-Ecobricking isisombululo esijulile seplastiki yakho. Okokuqala, ipulasitiki iyimpahla emangalisayo enezinto ezinhle futhi kuyamahloni ngoba iyahamba. Okwesibili lapho ipulasitiki ‘ihamba khona’; lihlambalaza izinto eziphilayo ezisisondezayo kanye nezinye izinto eziphilayo. Okwesithathu, i-Ecobricks iqukethe izimiso zokuvuselela ezisitshela sonke isiqondiso esinempilo.
Uyabona, ngokuyinhloko i-ecobricks inika abantu, njengathi nawe, ukubeka izakhiwo ezingase zibe nezinkinga zeplastiki ukuze zisetshenziswe kahle. Ngisho kangcono, ibhukwana, izandla, kanye nenqubo yendawo yangempela ye-ecobricking isenza sicabange. Ukuqwashisa okukhulayo, kusibeka emgwaqweni wokuya ekudleni nokusebenzisa ipulasitiki ngokuhlakanipha. Empeleni, i-ecobricking isitshengisa ukuthi siyaphuma epulasitiki sonke futhi sibuyele ezindleleni zokuphila ezikujuleni ngokujulile nemigomo yokuphila. Siphule phansi izizathu zokuthi i-ecobricking ibe nemininingwane egcwele. Funda ku …
Iplastiki iyimpahla emangalisayo
Ukuthande noma ukuzonda, akukho ukuphika ukuthi ipulasitiki ihlukile! Ipulasitiki ingumphumela wenqubo ethatha amakhulu ezinkulungwane zeminyaka ukuguqula amahlathi asendulo nama-algae abe yi-petroleum negesi yemvelo ngaphansi komhlaba. Ipulasitiki nayo ingumphumela weminyaka eyikhulu yezinto ezintsha ezigxile ekudaleni izinto ezinjengefilimu yezithombe, iziqukathi zamanzi, kanye nazo zonke izinhlobo zamadivaysi ezenza impilo yethu yanamuhla ibe namandla. Emashumini eminyaka edlule, izindawo eziyingqayizivele zepulasitiki ziye zasebenziswa ngokuphindaphindiwe nezinkampani ezinkulu ukuthuthukisa ibhizinisi labo jikelele. I-Plastic iye yakhonza izinkampani zomhlaba wonke ngenxa yemiphakathi yasendaweni kanye nezinto eziphilayo – lapho kuye kwalahlwa khona futhi kushiswa khona. Nge-ecobricks sinethuba lokuguqula lokhu nxazonke, futhi ufake ipulasitiki ukuze isetshenziselwe ukuzuzisa imiphakathi yasendaweni kanye nemvelo. Nge-ecobricks, sisebenzisa izici zepulasitiki ezazikade zinenkinga – ukuhlala isikhathi eside, ukuhlala isikhathi eside kanye nokusheshisa kwamanzi, futhi esikhundleni salokho ukubeka ekusebenzeni okuhle nokuluhlaza.
I-Ecobricks imicu yamaplastiki ngaphandle kwe-biosphere.
Amaplastiki ku-biosphere aphazamisa imijikelezo yokuphila. I-Ecobricking ivumela ukugcinwa nokulawula isikhathi eside izinto ezizophela kuzo zonke izinto ezizophela. I-Ecobricks isebenzisa leyo nkinga (ubude bepulasitiki) ukuze ifake ubuthi obukhona. Amaplastiki aphule futhi angcolise kangangokuthi indawo yawo yendawo igxile ezakhiweni (ikakhulukazi elangeni, amanzi kanye nokungqubuzana). Ngama-plastiki e-ecobricking ebhodleleni, indawo engaphansi kwenetha yepulasitiki incishiswa yi-factor of a thousand. Ngokucubungula ipulasitiki ehlanzekile kuphela, ukuvinjwa kwegesi le-methane kuvinjelwe. Ngokusungula ibhodlela, ukubola kwepulasitiki kuba yinto engenakwenzeka. Ngenxa yobude obude be-PET obuvikelwe emisebeni ye-UV, i-ecobricking igibela kahle ipulasitiki ngokungapheli ngaphakathi ebhodleleni. Yiqiniso, kubalulekile ukwakha kahle nge-ecobricks ukuvimbela ukulimala. Landa futhi ulandele izimiso namaqhinga ethu wokwakha lapho usebenzisa i-Ecobricks: Umhlahlandlela wokwakhiwa kwe-Ecobrick.
I-ecobricking kuvuselela ukukhanya kwemvelo.
Ukungcoliswa kwepulasitiki kubangelwa ukucabanga okuncane, okungafani nokungazi kahle izindawo zepulasitiki. Abantu abaningi abaqapheli ukuthi ipulasitiki enobungozi neyobuthi ingaba kanjani – ngakho-ke baqhubeka bedla, bejikijela, bashisa noma bavuselela ipulasitiki yabo. I-Ecobricking ikhuluma ngalokhu ngokuqondile. Zonke izinto zethu zokuqeqesha ziqala ngokufaka izingozi ezingase zibe khona zepulasitiki. Mhlawumbe okubaluleke nakakhulu, izinyathelo ezenziwe ngezandla zokwenza i-ecobrick ziphakamisa ukuqonda kwendalo. Kulabo abenza ama-Ecobricks, bayazi ukuthi umsebenzi onzima-kungathatha amahora omsebenzi ozinikezele kanye nesaka elikhulu lepulasitiki ukwenza i-1.5L Ecobrick eyodwa. Inqubo ihlolisisa ngokulinganayo. Kuboleka ekubhekiseni okukhona kwezinto ezibonakalayo esigxotsheni ngasinye sokuthi “udoti” uqothulwe. Uthola ama-Ecobrickers aveza: Leli plastiki lavelaphi? Kuphi okuya khona? Kungani kulapha? Kuzoba kuphi eminyakeni eyikhulu? Kungabe kungcono ukukhula nje ikhofi yami? Ukuhlonipha izizukulwane ezizayo nezinye izilwane, kumele siqale ngokuzicabanga. I-Ecobricks inikeza inhlanhla ebaluleke kakhulu ekucabangeni okunjalo (lesi sihloko kanye nokufunda kwakho yisibonelo salokhu). I-Ecobricks iba yisisusa sokubona indlela yokuphila yomuntu ngokuvumelana ngokujulile nemibuthano yokuphila. Bheka I-Ecobrick Vision Guide
Ama-Ecobricks agcina iplastiki ngaphandle kwe-Industrial Recycling
Ama-Ecobricks anika izakhamizi ukuthi zithathe ipulasitiki ohlelweni lwezokuvuselela izimboni, olwenza kanjalo lugcine luvela kwi-biosphere futhi lugcine amandla.
Lapho ipulasitiki “i-Recycled”, iphinda ingene ohlelweni lwezentengiselwano olusatshalaliswa emhlabeni wonke oludla amandla amaningi futhi lithembele kubantu abasebenza ezimweni ezinobuthi. Ngaphezu kwalokho, wonke ama-plastiki angena kulesi simiso ekugcineni athola indlela yokuphuma, futhi angene ku-biosphere. Ngokuphambene nenkolelo evamile, ipulasitiki esetshenzisiwe ayitholi kabusha into efanayo yepulasitiki. Uma ipulasitiki esetshenzisiwe iyancibilika ibe yi-pellet eyisisekelo ukuze iphinde isetshenziswe, ingavamile ukuba isigaba esifanayo sepulasitiki kwakuyiyokuqala. Isibonelo, i-plastic PET ibhodlela ayisetshenzisiwe kwenye ibhodlela le-PET, kodwa ibe yindlela ephansi yepulasitiki, enenani eliphansi. Ezingcolile, ezingcolile futhi ephule ipulasitiki ingahle ibe phansi-ibhayisekile ibe uhlobo lwepulasitiki elinenani eliphansi. Ngenxa yenani eliphansi, amathuba okubuyiselwa kabusha ayancishiswa ngomjikelezo ngamunye we-“Recycling”. Ngomjikelezo ngamunye “amathuba okuthi ipulasitiki idilizwe noma ifakwe kwi-biosphere iyanda. Ngokungavumelekile, yonke ipulasitiki ohlelweni lwezokuvuselela izakhi luzophela ku-biosphere. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lwezokuvuselela izimboni lubhidliza ipulasitiki emhlabeni wonke ngendlela ephakeme yokuhamba. Ipulasitiki ithengwa futhi idliwe eMelika, bese ithunyelwa eJalimane ukuze iqhutshwe, bese ibuyela e-Asia ukuze iphinde yenziwe. Lolu hambo lubandakanya iziqukathi ezinkulu zokuthutha, amaloli, izikebhe, amafektri nokuningi. Amakhadi alolu hambo, amafektri, avuselela izitshalo kanye nezitolo ezinkulu, ashukumisela abantu emisebenzini evame ukuqedwa ngokuphelele ezweni elingaphandle (ukushisa kwelanga, umoya omusha, amanzi amasha, ukudla okusha akukhona) futhi esikhundleni sokwemvelo izindawo zokushintsha isikhathi eside. Emazweni amaningi, “abaqoqi bemfucumfucu” basebenza ngaphansi kwelanga elishisayo ezindaweni zokulahla ezithuthumayo ukucubungula nokuhlela ama-plastiki ukuze “abuyele kabusha”. Ngokuphambene nalokho, i-Ecobricks isiza ukuyeka ukukhuphuka kweZimboni ngokumane usisuse kule nqubo yomhlaba wonke. Esikhundleni salokho i-ecobricks igcina ipulasitiki yendawo – ngaleyo ndlela igcina amandla nokusika ukusekelwa kwethu kwezimo zokusebenza ezingasebenzi. Funda kabanzi:Recycling, the evil illusion
I-Ecobricks iyisisombululo sokushintsha isizukulwane-kuya-generation
Ama-Ecobricks, nazo zonke izinhlelo zokusebenza kusayithi lethu, ziyisisekelo se-Cradle-to-Cradle. Lokhu kusho ukuthi impilo elandelayo ye-Ecobrick ihlelwe ekudalweni esikukhipha kuzo. Konke kufike ekupheleni kwayo. Maye, ukungcola kubangelwa ukucabanga okufushane: hhayi ukuhlela ukuphela kube yiklamo yomkhiqizo. Iningi lemikhiqizo esiyisebenzisayo namhlanje ihamba kusukela ekuzalweni kwabo efakini, ezandleni zethu, ethuneni labo-okuhlala njalo endaweni ethile ye-biosphere yoMhlaba. Lena inkinga ethile ngepulasitiki, njengoba ihlala isikhathi eside ukusetshenziswa komkhiqizo. Ukungcola kuwumphumela. Nge-Ecobricks, senza izinto ngokuhlukile. Ukufunda emigqeni engapheli yokuphila, sisebenzisa i-Ecobricks ngendlela ekulindela umjikelezo wabo olandelayo. Esikhundleni somugqa oqondile wezinyoni kuya ethuneni, singadonsela umbuthano. Singenza isiqiniseko sokuthi i-Ecobricks yethu isuka kwesinye isidlo kuya kwesinye, kuya kwesilandelayo. Lona umoya we-Ecobrick Modules neLeGO. Lona umqondo wokusetshenziswa okuncane okuyi-cob ekwakhiweni kwe-Ecobrick. Funda kabanzi ku-Ecobricks: I-Cradle to Cradle
I-Ecobricks inikeza amandla izakhamizi kanye nemiphakathi ukuba ihambe ngokudoba okungcolile
Abantu abaningi, imiphakathi kanye nezinkampani bazizwa badinga ukuthembela esikhungweni esingaphandle ukuze baphathe ngendlela efanele nge-plastic yabo. Iningi lezinhlelo zokuvuselela kabusha zendabuko libiza izindleko zamaRandi. Nge-ecobricks asikho isidingo sokuba isitshalo esikhulu sokuvuselela noma i-Incinerator enkulu. I-Ecobricks ivumela isenzo somuntu ngamunye kanye nomphakathi (ngaphandle kwesidingo samakhono akhethekile, imishini, izakhiwo, ezezimali noma imvume yezombangazwe), ukuguqula ukugeleza kwepulasitiki kube izigxobo zokwakha eziwusizo, zero nezindabuko ezingapheliyo. Abantu bangase baqale kahle kulo mzuzwana ukuba baphathe ipulasitiki yabo: konke okudingekayo ibhodlela leplastiki kanye nenduku. Uma sekuqalile, ama-Ecobrickers anikwe igunya lokuhamba udoti we-100% we-zero.
I-Ecobricks ivumela ukuhlelwa kabusha kweplastiki ukuze kwenziwe izinhlelo zokusebenza.
Ukusetshenziswa kwepulasitiki kuye kwasetshenziswa iningi izinkampani ukuthumela imikhiqizo eshibhile, ehlala njalo emhlabeni jikelele futhi iqhubekisele phambili imibuso yabo, engasaphinde! Ukwakheka kwepulasitiki kusuka ohlelweni lomhlaba wonke kuvumela ukuthi kusetshenziselwe inzuzo yendawo. Nge-Ecobricks, wena kanye nami, izikole nemiphakathi singakwazi ukubeka iplastiki yabo ukuthi isebenzise endaweni yangakini. I-Ecobricks ingasetshenziselwa ukwakha zonke izinhlobo zezinto ezinkulu!
Izikhala ezihlaza zomphakathi
Bona ikhasi lethu lokwakha ukuthola imininingwane eyengeziwe.
I-Ecobricks iyisisombululo esiphansi samandla epulasitiki
Ukuze uphinde usebenzise izinto zebhokisi lepulasitiki elilula uhlelo lwembulunga yonke yokuvuselela izimboni lisebenzisa amandla amaningi. Ipulasitiki iqoqwa okokuqala ngamaloli futhi ithunyelwa esikhungweni sokuhlunga esihilela imishini enkulu. Ipulasitiki isuke ithunyelwa emhlabeni jikelele kwisisekelo sokuthi siphenduke izinto zokusetshenziswa. Lezi zinto eziluhlaza ziyathunyelwa efektri ukukhiqiza umkhiqizo omusha. Lo mkhiqizo uthunyelwa emhlabeni jikelele esitolo.
Ngokuphambene nalokho, u-Ecobricking nokusetshenziswa kwe-ecobrick kwenzeka ngaphakathi kwendilinga yomphakathi womuntu. Ipulasitiki esetshenzisiwe isetshenziswa endaweni yangakini – akukho mishini, ezokuthutha noma izinhlelo eziphezulu ezidingekayo.
Izindlela zokuphatha imfucuza yendabuko zidinga amabhajethi amakhulu, ubuchwepheshe benkampani kanye namandla amaningi okusebenza. Ukuvuselelwa kabusha kwebhodlela lepulasitiki kungabangela ukuthi ipulasitiki iqhubekele emhlabeni wonke esitolo esiseCanada, esiteshini saseChina, esivayini ePhilippines, emfuleni, olwandle. Ngokuvamile, ngokushesha nje lapho idolobha lakha isitshalo sokuvuselela kabusha, kukhona ipulasitiki kakade kunomthamo.
Ukuhleleka okudingayo akudingi imishini ekhethekile, amakhono, noma izimali okumele ziqaliswe. Ubuchwepheshe buyi-100% umthombo ovulekile. Ngenxa yokuthi kulula, i-ecobricking ingasakazeka futhi ifinyelele ngaphezu kwamazinga okusetshenziswa kwepulasitiki.
I-Ecobricks ibeka i-Carbon Dioxide
Ipulasitiki yenziwe ngamakhemikhali e-petroleum, okwenziwa ngamafutha. Ukushiswa kwepulasitiki (emhlabeni wonke wezinhlobo ezivame kakhulu zokulahlwa kweplastiki) kudala 3.1Kg weC02 nge-1Kg yepulasitiki. Uma ipulasitiki ishiywe elangeni, i-C02 ikhishwe futhi enkambisweni yokuhlunga isithombe. Ukukhululwa kwe-C02 kungenye yezimbangela ezinkulu zokufudumala kwembulunga yonke. Ngokupakisha ipulasitiki ebhodleleni ukwenza i-Ecobrick, sigcina iplastiki ukuthi ingashiswa noma ihlaziywe. Uma i-ecobricked, indawo engaphansi kwenetha yonke ipulasitiki egcwele iyancishiswa yi-factor of thousands – ngokulinganisa ukunciphisa ukuvezwa kwe-UV. Ubuningi be-ecobrick egcwele (ngokuvamile phakathi kuka-30-40g / ml) nakho kwenza kube nzima kakhulu ukuba i-ecobrick ihlwithe. Uma isetshenziswe ekwakhiweni kwe-cob, ayikho ithuba le-UV, ukushisa noma ukuhlukunyezwa komzimba. I-C02 yepulasitiki ilandelwa ngokuphumelelayo – njengamafutha angaphiliwe ngaphansi komhlaba iyisitoreji semvelo se-C02. Ngokwesilinganiso esisodwa se-600ml Ecobrick sizofaka u-0.62kg we-CO2 futhi i-1.5L Ecobrick izofaka u-4.6Kg we-CO2.
I-Ecobricks iyinkinga ephansi ye-tech, Open Source
Ubuchwepheshe be-Ecobricking yakhelwe kusuka emhlabathini ukuze bufinyeleleke, bube lula futhi bukwazi ngaphandle kwemali, imishini, noma imishini ekhethekile. Leli sayithi kanye nabanye abaseduze nenetha, izindlela zokwabelana kanye nezinqubo ezintsha, ngaphandle kwentela, besebenzisa i-Creative Commons yamahhala-ukusabalalisa ilayisense. Ngenxa yalokho, akukho nzuzo noma ukushintshaniswa kwezimali eziyinhloko ekwenzeni i-ecobricks noma isicelo sabo. Ngakho-ke izisusa ze-ecobricking zihluke ngokuphelele ekudingeni izinzuzo zokuvuselela izimboni, ukuchithwa-kuya-amandla, ukushiswa komlilo, kanye nezinye izici eziningi, ubuchwepheshe obunikazi.
Ecobricking kusakazeka ngokushesha
Ukukhiqizwa kwamaplastiki okwamanje kuqhubeka ukwanda ngezinga elilinganiselwe elilinganiselwe. Izindlela zokuvuselela izimboni zendabuko azikwazi ukuqhubeka. Ukuqhamuka, njengesixazululo esiphezulu-tech, evulekile, isakazeka endaweni yesifundazwe ngegciwane lesandulela ngculaza – ngokushesha lidlula izinga lokusetshenziswa kweplastiki yendawo. Edolobheni laseJogjakarta, uhulumeni kamasipala wabona ukusabalala kwe-écobricking endaweni ngayinye yezingxenye zayo ezingu-453 ezinyangeni eziningana. ENyakatho yePhilippines, i-ecobricking isakazeka kulo lonke uhlelo lwesikole, olubandakanya abafundi abangu-250 000, kungakapheli unyaka owodwa. Edolobheni laseBontoc, i-écobricking yasiza ukunciphisa ukukhishwa kwepulasitiki kamasipala ngendlela ephawulekayo, ukuthi i-dumpsite yendawo yavulwa zingakapheli izinyanga eziyisithupha. Esikhathini ngasinye, uma usungulwe ngendlela ejwayelekile, ukuqubuka kwe-ecobricking kuholela ekutheni umthamo omkhulu wemfucumfucula epulasitiki eyenziwa emphakathini esikhathini esifushane neyesikhathi eside.
Plastic Degradation and Its EnvironmentalImplications: Iphephabhuku lezindlela ezahlukeneyo ama-plastiki ahlaziywa abe yi-toxin yemvelo.
‘Recycling: The Evil Illusion’ i-essay ekukhohliseni kabusha kwemishini yezimboni
A Reflection on the Ethics of Ecobricking
Okulandelayo: Indlela yoku-Ecobrick
I-Ecobricks yisisombululo esijulile epulasitiki. I-Ecobricks nazo zonke izinhlelo zokusebenza kule sayithi ziyisisekelo Isizukulwane ngesizukulwane.
Ingabe kukhona ukuxhumana phakathi kokungcoliswa komhlaba kanye nemizimba yethu ?
Thola Vision Ecobrick Guide